दिल्लीबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘मेरो कार्यकाल चार-पाँच दिन मात्रै !’ | रिपोर्टर्स नेपाल
दिल्लीबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘मेरो कार्यकाल चार-पाँच दिन मात्रै !’
२०७६ जेष्ठ १८ गते प्रकाशित, l ०६:४५
काठमाडौं १८ जेठ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौँ फर्कनु अघि दिल्लीमा संवाददातासँग गरेको कुराकानी :
यहाँहरु (ओली र मोदी) दुवैको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालमा पनि निकै छलफल र सहकार्य अघि बढेकाले आरम्भदेखि अहिलेसम्मको बीचमा आपसी सम्बन्ध कहाँ पुगेको छ?
मोदीजी र मेरो सम्बन्ध व्यक्तिगत रुपमा निकै राम्रो छ। हामी पटक-पटक आउने जाने पनि गरिरहेका छौँ। यो पुरानै सम्बन्ध पनि हो। कूटनीतिक हिसावको मात्र आवागमन होइन। निजी तवरमा पनि हार्दिकतापूर्ण कुराकानी हुन्छ। यसपटक म उहाँको दोस्रो कार्यकालको सफलताको लागि बधाई तथा शुभकामना दिन दिल्ली आएको हुँ। हाम्रो सहकार्य राम्रो रहने मेरो विश्वास छ।
नेपाल र भारतका कतिपय विषयमा छलफल हुने, समझदारी हुने तर काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। अहिले पनि कैयन पुरानै मुद्दामा दुवै पक्ष अल्झेको झैं लाग्छ, नि?
लामो समयदेखि अल्झिने बानी परेको हुनाले नै हो। नअल्झने बानी पारेर उल्झन फुकाउँदै जानेतर्फ हामी उन्मुख हुँदै छौँ। विभिन्न संयन्त्रमार्फत् त्यस्ता विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौँ।
अहिलेको भ्रमण खासगरी के कस्ता विषयमा केन्द्रित रह्यो?
साधारणतया यो भ्रमण दुईपक्षीय विषयमा कुराकानी गर्ने खालको होइन। तर पनि हामी भेट हुँदा छलफल हुन्छ। यहाँ धेरै देशका नेतासँगै रहने हुनाले पनि भेट संक्षिप्त रहनु स्वभाविक हो। यो भ्रमण बेग्लै प्रसंगको पनि हो।
तपाईं दिल्ली यात्रामा हुँदा पार्टी एकताको पाँच बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक भएको छ नि?
दिल्ली उड्नुअघि विमास्थलमा प्रधानमन्त्रीका सात ‘पोज’
मोदीको शपथमा प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच भेटवार्ता : रुद्राक्षको माला उपहार
त्यो पत्र कहिले गोप्य थियो र? पत्र उहिले नै सार्वजनिक भएको हो। यो विषयलाई अहिले उछालेका छन्। के भनौ र ? अनावश्यक विषय उछाल्ने नेपाली चरित्र नै हो।
त्यसो भए त तपाईंको कार्यकाल आगामी एक वर्ष मात्र देखिन्छ नि?
हाँस्दै…। एक वर्ष हैन। चार-पाँच दिन मात्रै बाँकी छ। अब म के भनौं ?
सार्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर, यहाँ आउँदा विम्स्टेक सदस्यको हैसियतमा आउनु भएको छ। सार्कको भविष्यलाई कसरी हेर्नु भएको छ?
सार्क हामीले मात्र अघि बढाउने होइन। यसमा सबै सदस्यको उत्तिकै जिम्मेवारी र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै विकास प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सहकार्य अपरिहार्य छ। यसमा मध्य भागमा रहेको भारतको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हामीले भारतलगायत सबैसँग छलफल गरिरहेका छौँ। सबैको सहयोग रहेमा सार्क अघि बढ्छ।
सार्कमा यहाँले भारतको सहयोग पाउनुहुन्छ?
हामी अपेक्षा गछौं। सार्कलाई अघि बढाउनु सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्छ।
अब ‘सक्षम श्रमिक, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’
प्रधानमन्त्रीलाई मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गरेलगत्तै धर्मप्रचारक युनिभर्सिटीसँग सम्झौता